What’s New | Community Driven Development Project | Page 2
What’s New	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (အထက်မြန်မာပြည်)Day 2
ကျေးလက်/ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်တွင် (၂၅/၂၆/.၇.၂၀၁၆)ကို ယနေ့ဆက်လက်ကျင်းပရာ မြို့နယ် ၁၄ မြို့နယ်မှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများသည် မိမိတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ နောက်နှစ်အတွက် စီမံကိန်းပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် အကြံပြုချက်များ အားသာချက်/အားနည်းချက်များ နှင့်ပတ်သက်၍ အုပ်စုငယ်များခွဲ၍ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပြီး ဆွေးနွေးရာမှ ရရှိလာသော အချက်အလက်များအား အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။ စည်းရုံးရေးမှူးများ၏ အသံများ/ဆွေးနွေးချက် အကြံပြုချက်များသည် စီမံကိန်းစက်ဝန်းပြီးဆုံးချိန် သို့မဟုတ် ပြီးဆုံးခါနီးအချိန်တွင် စီမံကိန်းမြို့နယ်တိုင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ # လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။	Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လူထုစည်းရုံး​ရေးမှူးများ ဖိုရမ်​(အထက်​မြန်​မာပြည်​)
စိုက်​ပျိုး​ရေး ​မွေးမြူး​ရေးနှင့်​ဆည်​​မြောင်းဝန်​ကြီးဌာန ​ကျေးလက်​​ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်​​ရေးဦးစီးဌာန ကိုယ​နေ့ ​ကျေးလက်​​ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်​​ရေးဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်တွင်​ကျင်းပခဲ့သည်​။ ညွှန်​ကြား​ရေးမှူးချုပ်​ ဦးခန့်​​ဇော်​ မှ အဖွင့်​မှစကား​ပြောကြားခဲ့သည်​။ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူ ရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၏ လုထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (အထက်မြန်မာပြည်) Community facilitators Forum (Upper Myanmar) အစည်းအဝေးမှ လက်ရှိအချိန်ထိဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှ အတွေ့အကြုံ များ အကြံဥာဏ်များအကြံပြုဆွေးနွေးချ က်များမှရရှိ လာသော အကြံပြု ချက်များကို နောင်လာမည့်စီမံကိန်းများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြု နိုင်ရန် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည် 2572016	Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း‬ သုံးလပတ် အစည်းအဝေး
#‎လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း‬ သုံးလပတ် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း – စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ၂၀၁၂ မှ စတင်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့၊ ၂၀၁၃ မှာ ၃ မြို့နယ်နှင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ယခုဆိုလျင် ၂၇ မြို့နယ် တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပီး လာမယ့်နှစ်တွင် မြို့နယ် ၂၀ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်၊ ယခုလို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက် လာနိုင်တာကတော့ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများရဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ -စီမံကိန်းသည် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နဲ့ ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်သည့်အတွက် အခက်အခဲများစွားစွာ ရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းသည် learning by doing ပုံစံနှင့် သွားတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း ၁ နှစ် ပြီးဆုံးတိုင်း စီမံကိန်း လက်စွဲ operation manual ...	Read More »
ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ပြင်ထပ်အော်ကျေးရွာ ရွာအဝင်လမ်း ပေ(၂၂၀၀)အရှည်ရှိ ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ကျွန်းစု ဇွန်လ ၂၁ ရက် ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကမ်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပြင်ထပ်အော်ကျေးရွာတွင် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကျေးရွာအဝင်လမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲကို ဇွန်လ(၂၁)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီအချိန်ခန့်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရန်ပုံငွေ(၁၄၉)သိန်းဖြင့် ပေ(၁၅၀၀)အ ရှည် (၈)ပေအကျယ်ဖြင့် ချထားပေးရာ ကျေးရွာနေပြည်သူများက ၎င်းချထားရန်ပုံငွေဖြင့် ပေ(၂၂၀၀)အရှည် (၁၀)ပေအကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်အား ကျေးရွာပြည်သူထည့်ဝင်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ ရာ ငွေကျပ်သိန်း(၂၅၀)ကျော် ကုန်ကျခဲ့ကြောင်း ကျေးရွာကြီးကြပ်ရေးကော်မတီထံမှ သိရသည်။ ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲကို ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပြီး ကျေးရွာပြည်သူ များက လမ်းဖြစ်မြောက်ရေးတွင် အလှူငွေများနှင့် ဘိလပ်မြေအိတ်များ လှူဒါန်းခဲ့ကြသော အလှူရှင်များအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်	Read More »
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ Senior Director ဖြစ်သူ Mr Ede Ijjasz-Vasquez နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော် နှင့် အဖွဲ့ လူထုဗဟိုပြုစီိမံကိန်းမြို့နယ် ထန်းတပင်မြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ Senior Director ဖြစ်သူ Mr Ede Ijjasz-Vasquez နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော် နှင့် အဖွဲ့ လူထုဗဟိုပြုစီိမံကိန်းမြို့နယ် ထန်းတပင်မြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုတတိယနှစ် အချိန် ကာလအထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မြို့နယ် ပေါင်း (၂၇) မြို့နယ်ထိ အကျိုးခံစား ခွင့်ရရှိ နေပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ Senior Director ဖြစ်သူ Mr Ede Ijjasz-Vasquez နှင့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံကိန်းရုံးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ...	Read More »
ငန်းဇွန်မြို့ နှင့်ညောင်ဦးမြို့နယ်များမှ ကျေးရွာ အဆင့်ကော်မတီဝင်များ လေ့လာရေးခရီးစဉ် ပထမနေ့
အဖြစ် ကန်ပက်လက်မြို့လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးတွင် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး နှင့် စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူများ က လေ့လာရေးအဖွဲ့များအား ကြိုဆိုမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် လေ့လာရေးလာရောက်သည့်အဖွဲ့များမှကော်မတီဝင်များက ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး လေ့လာရေးခရီးလာရောက်ရသည့်အကြောင်းအရင်းအား ရှင်းလင်းပြောကြားကာ သိရှိလိုသည်များအား မေးမြန်းခြင်း ဖြေကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။	Read More »
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါ်ညိုညိုဝင်း ၊ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စွာအောင်၊ကမ္ဘာဘဏ်(MSI)အဖွဲ့နှင့် အတူ လယ်ဝေးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးတွင် DRD,TTA,CF,TF များနှင့်တွေ့ဆုံ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါ်ညိုညိုဝင်း၊ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စွာအောင်၊ ကမ္ဘာဘဏ်(MSI)အဖွဲ့နှင့်အတူ လယ်ဝေးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးတွင် DRD,TTA,CF,TF များနှင့်တွေ့ဆုံကာ စီမံကိန်းနဲပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ၂၃ ၅ ၂၀၁၆	Read More »
ကျေးလက်လူထု၊အခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို၊ တို့ရှေးရှု
ဒေါ်စန်းစန်းလှ (ကျေးရွာစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဌ-အမျိုးသမီး) နှင့် ဦးချမ်းမြေ့အောင် (ကျေးရွာစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက် အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဌ – အမျိုးသား) တို့ ဘဏ္ဍာရေးစရင်းများအား စစ်ဆေးနေစဉ် ================================= “ကျေးလက်လူထု၊ အခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို၊တို့ရှေးရှု” ဆိုတဲ့ဆောင် ပုဒ်လေးနဲ့ကိုက်ညီအောင်တကယ် ပဲကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှ အလှူရှင်များနှင့်တကွ သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိ ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုကျွန်မတို့မြို့နယ်၊ကျေးရွာ များမှ ပြည်သူ အားလုံး ကိုယ်စားကျေးလက် လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းရဲ့ နည်းလမ်း စည်းကမ်း များအားလုံး ကို လေးစားပြီး အထူးပဲကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်ရှင်။ . ကျွန်မအနေနဲ့ ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှာ ထက် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ များကို ရေးသားတင်ပြရလျင်— . ကျွန်မအနေနဲ့ပထမနှစ်စီမံကိန်းမှာထက် ဒီနှစ် မှာ လူမှုဆက်ဆံရေးဗဟုသုတတွေ၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစရှိတဲ့ ဗဟုသုတ များစွာကို အများကြီး နားလည် ...	Read More »
ညောင်ဦးမြို့နယ် တောင်တော၊မျက်ခါးတော၊စက်စက်ယို၊ တယ်ပင်တဲကျေးရွာ CMT Trainingပြီးစီး
ညောင်ဦးမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တောင်တောကျေးရွာ မျက်ခါးတောကျေးရွာ စက်စက်ယိုကျေးရွာ တယ်ပင်တဲကျေးရွာများအတွက် CMT Training ကိုတောင်တောကျေးရွာ၌ ၁၅ ရက်နေ့နှင့်၁၆ ရက်နေ့တွင် ပို့ချ၍ပြီးစီးခဲ့သည်။ (၁၆ ၅ ၂၀၁၆)	Read More »
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်းနှင့်အဖွဲ့ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကြံခင်းမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်း
May 16, 2016	Comments Off on ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်းနှင့်အဖွဲ့ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကြံခင်းမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဦးစီးမှ တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးစိုးသန်းတို့သည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော ကြံခင်းမြို့နယ်ရှိလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများကလည်း တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ တာဝန်ယူမှုနှင့် အခက်အခဲများအား တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ အခက်အခဲများအား အဆင်ပြေမည့် နည်းလမ်းနဲ့ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ်။(၁၅ ၅ ၂၀၁၆)	Read More »
Page2of 7«12345	»	...Last »	Project Overview